Manaova fanalahidy manokatra fanovana rehefa manomboka Windows 10 | WebSetNet
Home/System Admin/Windows/Manamboara vetivety fanindroany rehefa manomboka ny Windows 10
Manamboara vetivety fanindroany rehefa manomboka ny Windows 10
AaronStuart Aug 9, 2018
1 409 Novaina ny 1
Ny Windows 10 "Fidio izay toerana nialako" dia manampy anao hiverina any amin'ny apps aorian'ny famerenana indray, fa ho an'ny folders, mila manova toerana haingana ianao.
Raha manana workflow matotra mitohy amin'ny fampiharana maro, antontan-taratasy sy lahatahiry misokatra, dia mety ho sosotra raha tsy maintsy hamerina ny PC ianao noho ny fampivoarana Windows na antony hafa. Rehefa tafaverina ianao, dia tsy maintsy mamerina ny zava-drehetra. Eny, manampy amin'ny fanamorana io olana io, manomboka amin'ny Windows 10 1709, Microsoft dia nanampy ny "Karakarao ny toerana nialako"Feature. Fanamarihan'ny Cortana izany ary ahafahana mampiasa rindrambaiko sy antontan-taratasy izay nampiasainao nandritra ny fotoana farany hialana. Na izany aza, dia tsy ahitana rakitsoratra izany. Azonao atao ihany koa ny mametraka ny folders amin'ny rindrambaiko manaraka miaraka amin'ny fanamarinana haingana ao amin'ny File Explorer Options. Ity ny fomba hanaovana izany.
Manaova fanalahidy misokatra rehefa windows boot
Mba hahazoana antoka fa miverina indray ny folders misokatra rehefa manomboka fivoriana vaovao ianao, sokafy ny File Explorer sy ny loko, dia fidio ny takelaka View ary Safidy> Hanova ny folders sy ny safidy fikarohana.
Azonao atao ny mametraka ny fanalahidin'ny Windows sy karazana: safidy folder ary tsindrio ny Enter na mifidiana ny lalao tsara indrindra avy eny an-tampon'ny valin'ny fikarohana.
Na aiza na aiza fomba hanaovana izany, dia hisokatra ny fikandran'ny File Explorer Options. Avy eo, mifidiana ny View vakizoro. Ary eo ambanin'ilay sehatra Advanced Settings, tsindrio ny bokotra ary tadiavo ny "Atero aloha ny lahatahiry windows amin'ny logon "ary tsindrio Ampiharo.
Izay ihany no misy. Amin'izao fotoana izao, rehefa manomboka ny rafitra Windows 10 ianao dia hanokatra indray ny fichier izay efa nisokatra tamin'izany fotoana izany rehefa miverina ianao hanomboka ny seho vaovao. Ary io endri-javatra io dia tsy anisan'ny Cortana Karakarao ny toerana nialako. Noho izany, raha manana izany fahafahana izany ianao, dia tsy ny dokam-barotra sy ny apps ihany no hivoaka rehefa miverina miditra, ankehitriny koa ny ordinateranao. Izany dia mety hanamora ny fampiendrehana mora kokoa satria afaka miverina miasa haingana kokoa.
Tsara koa ny manamarika fa raha manana rafitra tranainy ianao, dia mety hisy fiantraikany eo amin'ny fotoana fiatoana ny milina. Ohatra, raha manana ordinatera misy sary maromaro na horonan-tsary ianao dia afaka maka fotoana kely ho an'ny sary vetaveta hamoronana. Na izany aza, mahafinaritra ny mahafantatra fa safidy izany ary raha eo amin'ny rafitra maoderina manana processeur kalitao, RAM malalaka, sy SSD ianao, dia tsy ho hitanao ny fahasamihafan'ny fotoana boot. Mazava ho azy, mba hanamaivanana haingana ny fandrobana, dia afaka foana ianao fanesorana programa fanombohana.
Ahoana no fomba ahazoanao Mac toy ny endritsoratra malefaka eo amin'ny Windows 10
Windows 10 version 1809: Tandremo ny fikandrana Disk Cleanup
Ahoana no fomba hanovana ny endri-tsoratra Default ho an'ny Windows 10 Mail app
Ny fiarovana Microsoft Windows Security Updates February 2019 overview
Manamboara sehatra maromaro amin'ny drive USB amin'ny Windows 10 amin'ny fampiasana MakeWinPEMedia
Ampiasao amin'ny Windows 10 ny horonam-peo "OneDrive" automatique
Free Icecream PDF Editor ho an'ny Windows 10 / 8 / 7
Ny Windows 10 Fampahafantarana ho an'ny taona 2011 dia azo ampiasaina amin'ny August 2
Aug 10, 2018 amin'ny 13: 06
Tsara sy mahasoa vaovao.
Misaotra anao AK Techno Service
'Ny Sims Mobile' vs 'Sims FreePlay': Inona ny fahasamihafana?
12 Ireo zavatra tokony hatao Rehefa avy najoro Linux Mint 19
Ahoana no hanaisotra ny Windows Ink Workspace amin'ny Windows 10
Ahoana ny fametrahana sy ny fametrahana ny Firewall IPFire
Intel Core i5-8300H benchmarks (Coffee Lake, 8th Gen) vs i7-7700HQ, i5-7300HQ sy i7-8550U
Miaraka amin'ny OPPO Reno 10x Zoom: 6.6-inch OLED miaraka amin'ny No Notch sy Popup Selfie Camera
Razer dia manomboka ny New Blade Pro 17: i7-9750H sy RTX 2080 Max-Q
Ny rindrin'ny ASRock A320TM-ITX: Thin-ITX ho an'ny AMD APUs
Inona no atao hoe Cryptojacking ary ahoana no ataoko?
Ny 12 Best Email Newsletter Tools amin'ny 2019
TaoTronics TT-BH046 famerenana ny famerenana ny horonam-peo amin'ny horonam-peo: Famerenana ny fihenam-bidy, fa ny tsy fahampian'ny feo
Tolotra tsara indrindra amin'ny VPN: Famerenana sy fividianana torohevitra
Manangana Instagram malaza: Ireo tetikasam-pampitam-baovaon'olo-tsotra ao HubSpot mikasika ny fananganana fanentanana fire amin'ny Instagram
Fitsipika fampiasa amin'ny API: Ny serivisy mozika tsy miangatra dia mandeha amin'ny Android sy iOS
Miara-miasa amin'ny Razer vaovao vaovao X Chroma eGPU
Cavalier Audio Maverick fanaraha-maso fanaraha-maso tsy misy tambazotra: Miteny Bluetooth ity mpizara Wi-Fi mpampiasa ity
PowerDVD 19 revize: 8K UHD playback sy 4K UHD TrueTheater enhancesments
25 amin'ny Plugins Best für WordPress (es-la)
Ny 11 Best Tools Automation Software amin'ny 2019
Ny Torolàlana Farany amin'ny Google Analytics ao amin'ny 2019
Ny 13 Best WordPress Plugins Live Chat ao amin'ny 2019
Ahoana no hanakanana ny fangatahana HTTP ny tranonkalanao?
Ny Top 11 Best Email Marketing Services amin'ny 2019
Ahoana ny fampiasana ny dokambarotra an-tsarimihetsika mba hampiroboroboana ny vokatra sy ny fampidinana ny mpanjifa
Ny Outdoor Camera Pro ao amin'ny Vivint dia afaka mamantatra ny olona mifehy ny tranonao